#FreeBassel (#AfahoBassel): Any Ambadiky Ny Fàfan’ny Fanoherana Siriana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Septambra 2017 5:01 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Deutsch, عربي, Français, русский, English
Bassel “Safadi” Khartabil. Sary avy amin'i Joi Ito tao amin'ny Flickr (CC BY 2.0).
Nosoratan'i Monique Doppert
Sambany aho nihaona tamin'i Bassel tany amin'ny Fivorian'ireo Arabo bilaogera tany Beiroty. Tamin'ny nahitako azy voalohany amperinasa, nanampy mpanolotra fandaharana izy tamin'ny fandikàna tantara teknika iray avy amin'ny teny Anglisy ho amin'ny teny Arabo — tsy niomanana fa teo noho eo satria tamin'ny minitra farany izy no nangatahana hanampy. Nandritra ny fiatoana fisotroana kafe, noresahany tamiko ny fikasàny hanomboka toerana fijirihana informatika any Damaskosy. Fantatro fa lehilahy tena niavaka izy.
Taorian'ity fihaonambe manantantara ity dia nihaona im-betsaka izahay tany Beiroty sy Damaskosy. Ary mazava ho azy nitsidika ny Aikilab, ilay toerana fijirihana informatikany aho.
Tsy nisy nanam-po ilay fitroarana Arabo ho vetivety sy haingana. Hatramin'ny nanombohan'ny revolisiona tamin'ny Martsa 2011 dia nifandray tamin'i Bassel sy ny sasany tamin'ireo namany Aikilab aho. Nolazaiko azy ny momba ny tetikasa fitantarana iray tiako hatao, izay hifantoka amin'ny vondronà namana ao amin'ny faritra. Rehefa nandeha ny fotoana, niova ho asa fanaovana gazety fitantaràna nifantoka tamin'ny olo-malaza iray – Bassel – io hevitra voalohany io. Satria miha-sarotra ny mitsidika an'i Damaskosy, dia tamin'ny imailaka, Skype ary tamin'ny alàlan'ny hafatra sy bitsika (izay betsaka) izahay no nifandray.
Hosodoko Afaho Bassel avy amin'i @YallaSouriya
Mpandraharaha mahomby amin'ny aterineto i Bassel. Talohan'ny nisamborana azy, niasa taminà orinasa iraisam-pirenena maromaro, niaina tsara, ary mpifety amin'ny alina niaraka tamin'ny namany maromaro ao amin'ny tontolon'ny zavakanto sy horonantsary Siriana. Rehefa noteneninà mpanao gazetin'ny BBC haka horonantsary ny fikomiana Siriana ary handefa antsokosoko izany ho any ivelan'ny firenena izy, niova tanteraka ny fiainan'i Bassel. Nitarika ekipanà mpilatsaka an-tsitrapo tsy nànana afa-tsy ny findainy monja izy, izay nandrakitra ny revolisiona Syriana sy nanaparitaka izany tamin'ny haino aman-jery sosialy. Nankafy miafina ny asa fanoherana nataony i Bassel. Nanorina finamànana mandra-maty izy ary nihaona tamin'ny vehivavin'ireo nofinofiny. Saingy nihamafy ny ady. Nandositra ireo namany, na nosamborina na novonoina. Mahavariana fa nandritra ny fotoana lava dia nandeha tsy niafina mihitsy i Bassel. Nanomboka nanontany tena ny namany: Iza no niaro azy? Avy eo, tamin'ny 15 martsa 2012, nifanandrify tamin'ny tsingerintaona voalohan'ny Revolisiona Siriana – nivadika ny vintan'i Bassel. Nosamborina izy ary nampijaliana. Mbola migadra mandraka androany izy (14 Martsa 2014 andro nanoratana ity lahatsoratra ity tamin'ny teny anglisy).
Taorian'ny fisamborana azy, nanjary nanara-drafitra kokoa ny fikarohako. Nanao zavatra niavaka i Bassel nandritra ny taona voalohan'ny revolisiona – azoko antoka fa ny tantara tantaraiko, voasoritra etsy ambony etsy, dia mitantara fotsiny ny tendron'ny ranomandry.
Sarotra ny fanoratana tantara amin'ny maha-vahiny ny tena, nefa manana tombony maro koa. Mora ny mametraka fanontaniana adaladala ary satria tsy miteny Arabo aho, dia nipetraka nijery sy nandinika ny endriky ny tarehy, ny hafatra ampitain'ny vatana ary ny antsipirihany hafa akaiky kokoa. Na tsy azoz nihodivirana aza ny tsy fahitàna ny lafiny sasany amin'ny tantara, ny fijerena toe-javatra iray avy eny lavitra dia manampy hanana fomba fijery midadasika sy indraindray mazava kokoa.
Niresaka taminà fianakaviana, namana ary manam-pahaizana aho momba ny loza atrehana amin'ny famoahana ilay tantara. Ny ankamaroany dia mihevitra fa ny lanjan'ny famoahana ity tantara ity dia manamaivana ireo mety ho loza mety hitranga. Ity dia tantara fohy momba ny vondrona namana iray – tanora, ary mponina an-tanandeehibe sy saranga antonony – ampahany amin'ny tantara vao haingana any Syria. Amin'ny fomba maro, ny fomba fiainany sy ny nofinofiny dia mitovy amin'ny an'ireo tanora an-tanàndehibe hafa, kanefa niova tanteraka ny fiainan'izy ireo nandritra ny revolisiona sy ny ady an-trano naterak'izany.
Heveriko fa zava-dehibe ny fanasongadinana ireo idealy tany am-piandohana sy tam-pilaminana tamin'ilay revolisiôna. Manantena amim-pahatsorana aho fa ny hazavan'ity vanim-potoana ity dia hamirapiratra amin'ny alàlan'ny ady an-trano amin'izao fotoana izao ary hivoaka velona amin'ny herisetra sy ny fandravàna izay manimba ny firenena ankehitriny.
Ny hany azoko atao dia manantena fa i Bassel dia ho olona afaka indray, ary tsy ho ela. Afaka hamonjy ny vadiny sy ny fianakaviany ary ny namany. Ary hamaky ity tantara ity amin'ny findainy.
Mpanoratra sy mpisolovava ny haino aman-jery ary lehiben'ny tetikasa miaraka amin'ny Hivos i Monique Doppert. Monina any Pays Bas izy.
(Fanavaozana: Tamin'ny 2015, novonoin'ny manampahefana ao Siria i Bassel)